XOGO CUSUB: Kiisas cabsi looga qabo Corone-Virus oo laga sheegayo magaalooyinka Burco & Gaalkacyo.
BURCO(P-TIMES) – Inkastoo aysan laamaha caafimaadka ee Puntland & Somaliland midkoodna shaacin ama xaqiijin in kiisas cusub oo Corone-Virus laga helay magaalooyinka Soomaaliya ee deegaanadas, ayaa haddana warar soo baxaya ay sheegayaan in ay jiri karaan kiisas noocaas ah oo ka jira Gaalkacyo & Burco, oo ay soo gaareen todobaadkii u dambeeyey dad ka yimi dalalka Yurub.
Muwaadiniin Soomaaliyeed oo looga shakisan yahay cudurkan ayaa lagu arkay labada magaalaba, mid kamid ah Kiisaska ayaa la geeyey goob caafimaad oo kutaala magaalada Burco, waxaana lagu arkay Astaamo muujinaya xanuunka, inkastoo aysan jirin wax karantiil ah oo lagu sameeyey.
Laamaha caafimaadka ee magaalada Burco ayaa sheegay in muwaadinkaas iyo qaraabadiisu diideen in lakarantiilo, waxaana la sheegay in uu kusugan yahay magaalada Burco, balse ay arrintan sidii wax looga qaban lahaa ku howlan yihiin guddiga maamul ee Somaliland u xilsaartay arrintan.
Wararka Kiiska Gaalkacyo ayaa ah kuwa kordhaya, waxaana warar madax banaan ay sheegayaan in kahor intii aan la joojin duulimaadyada caalamiga ah, qof xumad daran ama qandho hayso uu kasoo dagay madaarka Gaalkacyo ee dhanka Puntland, kaas oo kusugan gudaha magaalada.
Sidaas oo kale waxaa jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya in ay jiraan shaqsiyaad kasoo laabtay dalka dibadiisa, oo kusugan magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo qaarkood isku karantiilay guryahooda, markii ay ka shakiyeen calaamadaha cudurkan oo ay isku arkeen.
Puntland & Somaliland ayaa magacaabay guddiyo la socda xaaladdan, waxaana la qaaday talaabooyin dheeraad ah oo looga hortagayo caabuqan, inkastoo ay wali jiraan dhaliilo ku saabsan, haddana ilaa hadda majiro Kiis si rasmi ah u shaaciyeen.
PUNTLANDTIMES, waxay xariiro kala duwan la sameysay baraha caafimaadka ee gobalka Mudug, waxayna sheegeen in aysan wali haynin cadeymo rasmi ah iyo dad kiisaskan ugu yimi in laga baaro, waxayna sheegeen in ay ku howlan yihiin wararka soo baxaya sidii ay dabagal ugu sameyn lahaayeen.
Madaxweynaha Puntland ayaa dadweynaha faray taxadar dheeraad ah, wuxuuna amray in loo baahan yahay in ay guryahooda joogaan oo ay ka dheeradaan isku imaatinka, taas oo uu sheegay in ay halis ka dhalan karo.
Somaliland,waxay karantiil ku haysaa in ka adan 20 qof oo ah dad Soomaaliyeed, kuwaas oo ka yimi dalalka Itoobiya, Mareykanka, Sweden, Ingiriiska, Kenya iyo dalka Imaaraatka Carabta, waxaana dadkaas looga shakisan yahay cudurka oo la marinayo baaritaan rasmi ah oo ku siman 14 maalmood.